अमेरिकी प्रधानसेनापति सुटुक्क किन पुगे युक्रेनी सीमानमा ? — Imandarmedia.com
अमेरिकी प्रधानसेनापति सुटुक्क किन पुगे युक्रेनी सीमानमा ?
एजेन्सी। अमेरिकी सेनाध्यक्ष मार्क मेलीले युद्धग्रस्त युक्रेनी सीमाको गोप्य भ्रमण गरेको खुलासा भएको छ। पेन्टागनका वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएअनुसार मेलीले गएको साता युक्रेनको सीमा नजिकै रहेको हवाई मैदानको भ्रमण गरेका हुन्।
यद्यपि उनले कुन देशको कुन हवाई मैदानको भ्रमण गरेका हुन् भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन। समाचारअनुसार मेलीले त्यहाँ पुगी हतियारको निरीक्षण गरेका थिए भने युक्रेनलाई हतियार दिने कार्यका विषयमा पनि जानकारी लिएका थिए।
समाचारमा जनाइएअनुसार उक्त हवाई मैदान अहिले नेटोले युक्रेनलाई हतियार पठाउने प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको छ। अमेरिकाले घोषित कूल ३५ करोड डलर मध्ये हालसम्म २४ करोड डलर बराबरको हतियार युक्रेनलाई आपुर्ति गरिसकेको छ।
तेस्तै,युक्रेनमा अमेरिकी अनुदानमा रसायनिक र जैविक हतियारहरू रहेको भन्ने रुसको आरोप अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। सो आरोप अस्वीकार गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्रेमलिनले पूर्वी युरोपेली क्षेत्रमा यस्ता गैरकानूनी गतिविधिबारे झूट फैलाएको बताएको छ।
रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोभले युक्रेनी प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूले प्लेग, एन्थ्राक्स, हैजा र अन्य घातक रोगहरूका खतरनाक जीवाणुहरू फैलाएको आरोप लगाएका थिए।
क्रेमलिनले जानाजान अमेरिका र युक्रेनले रासायनिक र जैविक हतियारका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट झूट फैलाइरहेको अमेरिकी आरोप छ।त्यसैगरी चीनका अधिकारीहरूले पनि,
यी षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू प्रतिध्वनित गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। यसअघि रुसले युक्रेनमा ३० भन्दा धेरै जैविक प्रयोगशालाहरु रहेको र ती प्रयोगशालाहरु जैविक हतियार विकास गर्न प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने बताएको थियो।
तेस्तै, युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेयता दुई साताको अवधिमा झण्डै ६ हजार रुसी सैनिक मारिएको अमेरिकाले अनुमान गरेको छ। नाम नबताउने शर्तमा एक वरिष्ठ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले सीबीएसलाई बताएअनुसार युक्रेनमा दुई साताको अवधिमा,
झण्डै ५ हजार देखि ६ हजार रुसी सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै, आक्रमणका क्रममा अरु १५ देखि १८ हजारसम्म रुसी सैनिक घाइते भएको हुनसक्ने जनाइएको छ ।प्रायः युद्धका क्रममा मृतकभन्दा घाइते हुनेको सङ्ख्या तीन गुणा हुने गर्छ।
मृतक र घाइते हुनेहरुको अनुमानित सङ्ख्याले रुसले त्यहाँ ठूलो क्षति ब्यहोरिरहेको देखिएको बीबीसीले जनाएको छ ।युक्रेनले आक्रमणका क्रममा १२ हजार रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ।
अघिल्लो सातामात्रै रुसले युक्रेनमा ५ सय भन्दा कम सैनिक मारिएको जनाएको थियो । यद्यपि दुबै पक्षको दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।